Fanambarana fa ny vokatra heparin an'ny hebreo Hebei Changshan dia nahazo ny fanamarinana Halal |
Fanambarana fa ny vokatra heparin an'ny hebreo Hebei Changshan dia nahazo ny fanamarinana Halal
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co, Ltd (etsy aloha dia antsoina hoe "Company") loharanom-pahefana hebreo heparin sodium ary tsindrona sela heparin nandalo ny Shandong Halal Certification Service Co., Ltd. (SHC) teo amin'ny toerana an-tserasera araka ny filazan'ny MUI HAS23000 sy MS1500: 2009, ary nahazo mari-pahaizana HALAL navoakan'ny masoivoho vao haingana isika. Ny toe-javatra mifandraika dia nambara toy izao manaraka izao:
1. Fampahalalana fototra momba ny fanamarinana zava-mahadomelina
Vokatra voamarina: Heparin Sodium API, Heparin Sodium Injection
Fenitra fanamarinana: MUI HAS23000 sy MS1500: 2009
Mpangataka: Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd.
HISAL fanamarihana fisoratana anarana HALAL: 03204928
2. Ireo fepetra hafa momba ny fanafody: ny sela Béline heparin dia ny sira sodium amina aminodextran sulfate nalaina avy amin'ny tsinay bitika mucus na bovine, izay fananan'ny mucopolysaccharides. Misy fiantraikany mitovy amin'izany amin'ny sodium heparin heparin amin'izao fotoana izao eo amin'ny vokatra fitsaboana. Ny sela tsindrona sodina heparin:
(1) ho an'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny trombiôma na embolizing aretina (toy ny myocardial infarction, thrombophlebitis, pulmonary embolism, sns).
(2) naparitaky ny coagulation intravascular (DIC) noho ny antony maro samihafa)
(3) Izany koa dia ampiasaina amin'ny fampandehanana ny hemodialysis, ny mivezivezy extracorporeal, catheterization, fandidiana mikrôdaina ary ny fitsaboana anticoagulation ny spesialim-pitondran-drà sasany. Ny fanamarinana HALAL dia fanamarinana fahazoan-dàlana ho an'ny Silamo mba hihinana sy hampiasa vokatra. Ankehitriny, firenena maro no manaiky ny fenitra MUI HAS23000 sy MS1500: 2009 momba ny fenitra fanamarinana halal. Ity taratasy fanamarinana ity dia mety eken'ny ankamaroan'ny firenena islamika.
3. fiantraikany amin'ny orinasa sy fampitandremana loza: Ny orinasa dia namolavola vokatra heparin loharano bovine nanomboka tamin'ny taona 2016. Tamin'ity indray mitoraka ity, ny vokatra heparin bovine dia nahazo ny fanamarinana HALAL, nanamarika fa afaka miditra amin'ny tsenan'ny silamo eo amin'ny fanekena ny tsirairay eran-tany. Ny orinasa dia hanara-maso ny fisoratana anarana amin'ny zava-mahadomelina na ny fandefasana ny atin'ny andian-tsarin'ny heparin loharano bovine any amin'ireo firenena Silamo. Amin'izao fotoana izao dia tsy mbola amidy ny vokatra andiany.